Latest Update Archives - Fashion Myanmar
Actresses & Model Girls
Actors & Model Boys
GFatt နှင့်တွဲဖက်ကာ “ကြိုး” သီချင်းကိုသီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ပန်းရောင်ခြယ်
Samsung ရဲ့ Ambassador တစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်ကို Samsung Galaxy Note 20 မိတ်ဆက်ပွဲမှာ တမူထူးခြားစွာ ဆံပင်ပုံစံကော ၀တ်နေကျ ဂါ၀န်ရှည်တွေလိုမဟုတ်ပဲ နုပျိုသွက်လက်တဲ့အလှနဲ့လိုက်ဖက်စွာ ဂါ၀န်တိုလေးကို ၀တ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုတော် GFatt နှင့်တွဲဖက်ကာ “ကြိုး” သီချင်းကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။< a>
နေလင်းသစ်နဲ့မေထက်ချိုအဖြစ် ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုမှာ လိုက်ဖက်ညီစွာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကောင်းမြတ်စံနဲ့မေလေးတို့ (၂)ဦးဟာ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုရိုက်ဖို့ မေလေးဘက်ကအတည်ပြုလိုက်ပါပြီတဲ့… ပရိတ်သတ်ကြီးရော အားပေးဖို့အဆင်သင့်ပဲလား? သူတို့နှစ်ယောက်ပြောထားတဲ့ Chat လေးပါ တွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ < a>
အပြင်မထွက်တာ ရက် ၄၀ ရှိပြီဆိုတဲ့ ခေး
သြစတေးလျမှာ ခင်ပွန်းသည်နဲ့အတူပညာသင်ကြားနေတဲ့ ယွန်း၀တီလွင်မိုးကတော့ 2020 အားလုံး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေလို့ သူမရဲ့ ဖေ့ဘွတ်အကောင့်မှ တဆင့် ဆုတောင်းစကားဆိုထားပါတယ် ”အပြင်မထွက်တာ ရက် ၄၀ ရှိပြီ။ Aussie အစိုးရက နောက်ထပ် lockdown ၆ပတ်လို့ကြေညာလိုက်ပြီ။ အခက်ခဲတွေများလွန်းတဲ့ 2020 အားလုံ ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၍< a>
ပန်ထွာဘုရင်မရဲ့နန်းတော်ရာဗိဿနိုးမြို့ဟောင်း ကိုရောက်ခဲ့တဲ့ မေလေး< a>
သေးသွယ်လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ ဘာ၀တ်၀တ်လှနေတဲ့ မင်းသမီးလေး စံရတီမိုးမြင့်< a>
ရွှေအိုရောင်မြန်မာ၀တ်စုံလေးနဲ့လှနေတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်တို့ရဲ့< a>
သူမခင်ပွန်းအတွက် မွေးနေ့အလှူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆုပန်ထွာ
ချစ်စရာသားလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆုပန်ထွာတို့မိသားစုဟာ သူမခင်ပွန်းရဲ့မွေးနေ့အတွက်အလှူတစ်ခုပြုလုပ်ပီး ခင်ပွန်းကိုဥက္ကာအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးဆိုခဲ့ပါတယ်။ 5.8.2020 ဖေဖေ Okkar Kyaw မွေးနေ့။ Happy Birthday ပါဖေဖေ။ မွေးနေ့မှစပြီး စိတ်ချမ်းသာ၊ကိုယ်ကျန်းမာ၊ ဘဝမှာအစစအရာရာပြည့်စုံစွာ အေးချမ်းစွာ အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းရပါစေ။ ဘာသာ၊သာသနာအကျိုးဆထပ်တိုးပေးကမ်းလှူဒါန်းနိုင်ပါစေ။ ဖေဖေ့မွေးနေ့မှာ သဃ်န်းပရိက္ခရာအစုံ အပါး ၅၀စာ၊ သံဃာ အပါး ၅၀ ထောကတ်ဆွမ်းထမင်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း ကောင်းမှူကုသိုလ်တွေအတွက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်မိပါတယ်။ ဖေဖေ့ကိုမွေးဖွားပေးကြတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးရင်းးးးး…. Happy birthday ပါဖေဖေရေ။ လို့ သူမဖေ့ဘွတ်အကောင့်မှတဆင့်ရေးသားခဲ့ပြီး အလှူအတန်းပြုလုပ်နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုလဲ သူမကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်အတွက်< a>
မိုးစက်များကပြောသောသီးချင်းကိုကြည့်ရှုသူအများဆုံးဖြစ်ခဲ့လို့ ပျော်နေတဲ့ ရွှေထူး
ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံလေး ကိုယ်တိုင် ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မိုးစက်များကပြောသော သီချင်းဟာ တကယ်ကောင်းသလို ကြည့်ရှုသူအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်… ကျွန်တော့်ရဲ့ Page က တင်ခဲ့သမျှ ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ Music Video ထဲမှာ Likes … Shares … Views အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့သော မိုးစက်များကပြောသော ကြည့်ရှုအကြံပေးအားပေးသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ… ❤❤❤ P.S မင်းသမီးပါတော့ ပိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်လို့ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားတာပါ မကြည့်ရသေးတဲ့ သူများအတွက် ဒီလင့်ခ်မှာ အားပေးနိုင်ပါတယ် …https://www.facebook.com/watch/?v=631492834388848< a>
သူမဝယ်ထားတဲ့ အပင်လေးတွေကိုကြွားလိုက်တဲ့ ခေး
စိမ်းစိမ်းစိုစို လေသန့်ပင်လေးတွေကြားမှာ အပင်လေးတွေထပ်၀ယ်မိပြန်ပီဆိုပီး ပျော်နေတဲ့< a>
လူပျက်များအ​ကြောင်း ~~~~~~~~~~~~~~~~ ​မြေနိမ့်ရာလှံစိုက် တပါးသူဘဝကိုနင်း​ချေ​ပြောရတာကို မိန်​ရေရှက်​ရေ ​ပျော်​မွေ့တတ်သူမျိုး ကူညီမလို​ဟန်​ရေးပြ ​နောက်ကွယ်ကျ​ချောက်ထဲတွန်းချတတ်သူမျိုး ကိုယ့်အခက်အခဲ​တွေကို ​ကျေနပ်ကြိတ်ပြုံး​နေတတ်သူမျိုး ​ထူးချွန်ကောင်းမွန်သည့်အရာ​တွေကို ချီးကျူး​ထောပနာပြုရန် ​ရေငုံနှုတ်ဆိတ်​နေတတ်ပြီး လမ်းမှား​​စေသော အရာ​တွေကို ညွှန်ပြတတ်သူမျိုး ကိုယ်ကျရှုံး ပြိုလဲ​နေချိန် လက်ညိုးထိုး အပြစ်တင် စွန့်ခွာသွားတတ်သူမျိုး ထိုသူတို့သည် လူတိုင်း ဘဝ တ​ကွေ့ မှာ​တွေ့ ခဲ့ကြမှာ အမှန်ပင်…. (လူပျက်= ​လောကကိုပျက်စီး​စေ​သောသူ) ၂၉နှစ်အ​တွေ့အကြုံ အ​တွေးအပိုင်းအစများ နီနီခင်​ဇော် Source from Ni Ni’s FB< a>
ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တူတဲ့ ချစ်စရာအဆိုတော်မလေး အေးမြဖြူ< a>
ကလေးတစ်ယောက်လို ပျော်ရွှင်နေတဲ့မိုး< a>
အရမ်းလှနေတဲ့ Sexy Model လုလုအောင်
အရမ်းလှနေတဲ့ Sexy Model< a>
ပန်းနုရောင် ဂါ၀န်လေးနဲ့ အရမ်းကို လှနေတဲ့ မင်းသမီးလေး< a>
ရိုးသားအေးချမ်းတဲ့အလှပိုင်ရှင်မလေး စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ စက်ချုပ်သင်နေတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့အတူ< a>
Kindness Ambassador အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့ နန်းမွေစံ
sexy model နန်းမွေစံက သူမကိုYVCT ကောလိပ်ကKindness Ambassador ခန့်အပ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်ပါတယ်။ YVCT ကောလိပ်က မွေစံကို Kindness Ambassador ခန့်အပ်ပေးတဲ့အတွက် ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ အစိုးရလူကြီးမင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙏🏻 မွေစံ့အနေနဲ့ ၁၀ တန်းမှာ ၅ ဘာသာဂုဏ်ထူး အမှတ်ပေါင်း ၅၁၈ မှတ်နဲ့ အထက(၂) ကမာရွတ်ကနေ နှစ်ခြင်းပေါက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး UM1 မှ M.B.,B.S(ygn) ဘွဲ့ကိုရခဲ့ပြီးနောက်ပိုငိး Trophy 🏆 တွေနဲ့ကင်းကွာခဲ့ပါတယ် INGO တွေမှာ ကျန်းမာရေးပရဟိတအလုပ်လုပ်နေရင်းကနေ sexy model ဖြစ်လာခဲ့င်္ပြးနောက်ပိုင်း ဒါက ပထမဆုံးရတဲ့< a>
Recently added Cele
Most viewed Cele
Myanmar Actress, Models and Celebrities
Jue Jue K
Khine Thazin Ngu Wah
Maw Phoo Mg
May Thon Kha
Nan Khay Mar
Nan Khay Mo
No No K
Patricia (Su Sha Naing)
Saung Yon San
Thu Zar Maung
Tinzar Nwe Win